Ahoana no hianaranao hahita ny ho avy?
Esoterica Mamantatra ny hoavy
Indraindray, rehefa misy zavatra mampalahelo mitranga, zavatra tsy azonao mialoha, te hahafantatra ny fomba hianaranao hahita ny ho avy ianao, mba hamonjena ny fianakavianao sy ny tenanao amin'ny dian-tongotra amin'ny ho avy . Ho an'ny fampandrosoana an'io fanomezana io, teraka avy amin'ny fahaterahana eo amintsika tsirairay, dia mendrika ny hametraka ezaka kely, ary aorian'ny fotoana iray dia ho takatrao fa ny fanamafisam-peo dia manome fampiofanana ary, ohatra, ny fiaretana.
Fomba hampivelarana ny fahafahana hahita ny ho avy: toro-hevitra fototra
Ny faniriana sy ny fiasan-tsasatra ihany no mety hitarika anao amin'ny vokatra tsara. Koa, manapaha hevitra momba ny toerana izay hanolorananao isan'andro isan'andro mba hampivelarana ny fahafahana hahita ny ho avy.
Voalohany, manaova asa mora, izay hivoatra tsikelikely, toy ny lanezy, amin'ny sigara. Noho izany, miezaha mitadidy kely fotsiny izay nitranga omaly. Ohatra, omaly ianao dia nanadino ny elo na tsy nahita fa ilaina ny maka azy, ary izany mandrapahafatesan'ny kofehy farany teo amin'ny oram-be. Tadiavo ho an'ny tenanao ny fampahalalana ilainao mba handresena ny zava-nitranga. Noho izany, azo atao ny manaraka ireto safidy manaraka ireto: "Misy ranomandry ao anaty kitapo" na "Tapa-kevitra ny hitondra ny eloko amin'ny asa aho, izay tena nahasoa indrindra."
Ary ankehitriny sokafy ny masonao ary afoy ny eritreritra rehetra, anisan'izany. ary toy izany no mahatonga anao hieritreritra raha mety hahita ny ho avy ianao. Eritrereto hoe tsy amin'ny androany ianao, fa amin'ny omaly. Miaraka amin'izany, mamindra amin'ny lasa ny fampahalalana rehetra efa hita ho anao. Ny hevitra tsirairay mifandraika amin'ny elo ao amin'io tranga io dia tokony hovana ho fihetseham-po, fahatsapana, fofona, fa tsy amin'ny endrika verbal. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mahatsapa ny toe-javatra iainanao omaly "I" omaly. Efa ela ianao no mahatsapa izany. Nahazo fampahalalana avy amin'ny ho avy ianao ary naka elo na napetraka pofona ao anaty kitapo.
Ny fanomezam-pahasoavana amin'ny fahitana ny ho avy dia hanomboka tsapanao tsikelikely, raha vantany vao manomboka mifindra avy amin'ny hevitra hoe "androany omaly" ianao. Mandritra ny dingana tsirairay toy izany, dia mifantoha amin'ny fihetseham-ponao, fihetseham-po .
Manomboka amin'ny fampiofanana kely indrindra, mampitombo ny haavonao, ohatra, maminavina ny vokatry ny lalao baolina kitra na ny zava-misy marina.
Tsarovy fa afaka mianatra mijery ny ho avy ianao raha vao mianatra mifantoka amin'ny "I", ny eritreritra sy ny fihetseham-po. Mifantoha amin'ny fanatsarana ny fahaiza-manao isan'andro.
Ahoana no iantsoana an'i Bloody Mary?
Ny ratsy amin'ny angano slavy - ahoana no hifehezana ny ratsy avy any an-trano?
Misy fitsangatsanganana ve?
Lelafo roa - famantarana
Misy afobe ve?
Ahoana no hiantsoana Slender?
God of Mercury
Trichomonas colpitis - fitsaboana
Carly Kloss dia namonjy izao tontolo izao ary nanokatra ny fandaharam-pampianarana fandaharana!
Aretina - Aretina sy fitsaboana
Ahoana ny fomba hanamboarana pilao avy amin'ny kisoa?
Teo anoloan'ilay ampakarina, dia nametraka ilay peratra teo amin'ilay rantsantanan'ilay iray ary nianiana tamim-pitiavana!
Ahoana ny fomba hananganana fizaràna amin'ny fandroana?
Karazana ahi-maitso inona no azonao ampiasaina amin'ny bitro?
Amin'ny inona ny manao sarafan fotsy?
Tempolin'i Goa Lavas
Jerry Hall dia nanambady an'i Rupert Murdoch
Fashion News - Herintaona 2013
Famindram-po mahatsikaiky momba ny Krismasy